वास्तुशास्‍त्र अनुसार कपूरलाई घरमा राख्नाले हुन्छ फाइदै-फाइदा ! हेर्नुहोस् ! – Dainiksamchar
HomeHealthवास्तुशास्‍त्र अनुसार कपूरलाई घरमा राख्नाले हुन्छ फाइदै-फाइदा ! हेर्नुहोस् !
वास्तुशास्‍त्र अनुसार कपूरलाई घरमा राख्नाले हुन्छ फाइदै-फाइदा ! हेर्नुहोस् !
October 11, 2020 admin Health 4166
हिन्दु धर्मअनुसार पूजामा यदि कपूरलाई समावेश गरिएन भने पूजा अधुरो हुने मानिएको छ । यसको प्रयोगले घरको नकारात्मक ऊर्जा हटेर जान्छ र साथै स्वास्थ्यको लागि पनि लाभकारी औषधि मानिन्छ । कपूरले हाम्रो जीवनमा कैयौ तरिकाले लाभ प्रदान गर्ने गर्दछ । वास्तु-शास्‍त्रअनुसार, लाखौ कोशिश गर्दा पनि काम बनिरहेको छैन, राम्रो समय आएको छैन, धनको कमि लगातार भईरहन्छ भने चाँदीको भाडोमा नियमित रुपमा ल्वाङ र कपुरलाई बाल्ने गर्नुहोस् ।
यसले बाधा-अर्चनको समाधान गर्नेछ र काम बन्नेछन् । घरमा वास्तुदोष हुनुको कारण घरको शान्ति भंग हुने गर्दछ । पसल या प्रतिष्ठानमा वास्तुदोष हुनुको कारण जहिले घाटा भईरहन्छ । घर या प्रतिष्ठानमा वास्तुदोष वा नकारात्मक ऊर्जालाई टाढा राख्नको लागि कपूरको डल्ला घरमा राख्नु पर्दछ । यसो गर्नाले नकारात्मक ऊर्जा हटेर जानुको साथै धन लाभ हुने गर्दछ । साथै यसको अन्य फाइदा यस्ता रहेका छन् ।
नेपालमै छ यो चमत्कारी मन्दिर : बोली फुटेको छैन भने बच्चालाई यो ठाउमा लैजानुहोस,नबोल्ने बच्चा बोल्न थाल्छन् (भिडियो)
आज पनि ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
महिनावारी हुँदा महिलाले झुक्किएर पनि गर्नुहुँदैन यी गल्ती, नत्र हुन्छ संक्रमणको खतरा
October 7, 2020 admin Health 1551
१. यो कहिले पनि नसोच्नुस् कि महिनावारी हुँदा गर्भ रहन्न भनेर असुरक्षित सम्बन्ध नराख्नुहोला । यो समयमा पनि गर्भवती हुने सम्भावना रहन्छ साथै संक्रमणको पनि अधिक खतरा हुन्छ । २. यो समयमा शरीरले यतिकै कमजोरी
September 25, 2020 Administer Health, International, Intertainment 6694
As anyone withaschool-aged child has doubtless been told, tech sector jobs are on the rise, making training for things like coding, web design, programming and cyber security hot commodities. Bureau of Labor Statistics
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्,
October 5, 2020 admin Health 635
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौंचुरोट खानेलाई मात्रै होइन अन्य मानिसलाई पनि फोक्सोको समस्या हुनेगर्दछ । यदि तपाईले चुरोट खानुहुन्छ भने फोक्सो अवश्य खराब हुन्छ । तर
LEX 18 agenda conversation: Job club (121752)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (113655)
Hello world! (113328)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (112086)